၃.၁ အနောက်ဘက်တွင် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း
၃.၂ အရှေ့ဘက်တွင် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း
အင်ပိုင်ယာ စတင်ခြင်း ၃၃၀-၄၇၆ အေဒီ[ပြင်ဆင်ရန်]
အင်ပိုင်ယာ ဒုက္ခတွေ့ကြုံချိန် ၄၇၆-၇၁၇ အေဒီ[ပြင်ဆင်ရန်]
အင်ပိုင်ယာ ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း ၇၁၇-၁၀၂၅ အေဒီ[ပြင်ဆင်ရန်]
အေဒီ ၇၁၇ တွင် အာရပ်တို့ကို ဘိုင်ဇန်တိုင်း မြို့တော် ကွန်စတန်တင်နိုပယ်လ်၏ အပြင်ဘက်တွင် အနိုင်တိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး အရှေ့ဘက်မှ အာရပ်တို့၏ ခြိမ်းခြောက်မှုကို ရပ်တန့်နိုင်ခဲ့သည်။ အနောက်ဘက်တွင်မူ ဘိုင်ဇန်တိုင်းတို့သည် ဘူလ်ဂေးရီးယန်း တို့အား တိုက်ခိုက်မှုများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ အချို့သော တိုက်ခိုက်မှုများမှာ အောင်မြင်ခဲ့သော်လည်း အချို့မှာ မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ ရလဒ် အနေနှင့် ဘုရင် အများအပြား တိုက်ပွဲတွင်း သေဆုံးခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် ဘိုင်ဇန်တိုင်း အင်ပိုင်ယာသည် အားကောင်းလာခဲ့ပြီး ၎င်း၏ ရန်သူများမှာ သူတို့အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အားနည်းလာကြသည်။
အင်ပိုင်ယာ ဆုတ်ယုတ်လာခြင်း ၁၀၂၅-၁၄၅၃[ပြင်ဆင်ရန်]
တာ့ခ်တို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်း ၁၀၇၁-၁၀၉၁[ပြင်ဆင်ရန်]
ဘိုင်ဇန်တိုင်းတို့ အသက်ဆက်ခြင်း ၁၀၉၁-၁၁၈၅[ပြင်ဆင်ရန်]
ဘိုင်ဇန်တိုင်းတို့ ပြန်လည်အားလျော့လာခြင်း ၁၁၈၅-၁၂၆၁[ပြင်ဆင်ရန်]
တာ့ခ်တို့က ဘိုင်ဇန်တိုင်းကို ဖျက်စီးခြင်း ၁၂၆၁-၁၄၅၃[ပြင်ဆင်ရန်]
အင်ပိုင်ယာမှာ ကြွင်းကျန်ရစ်သော အရာများ[ပြင်ဆင်ရန်]
ဝစ်ရှင်နရီ၊ အခမဲ့အဘိဓာန်တွင် Byzantine ကို ရှာဖွေကြည့်ရှုပါ။
De Imperatoribus Romanis Archived 13 September 2020 at the Wayback Machine.. Scholarly biographies of many Byzantine emperors.
12 Byzantine Rulers Archived 18 July 2016 at the Wayback Machine. by Lars Brownworth of The Stony Brook School; audio lectures. NYTimes review.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘိုင်ဇန်တိုင်း_အင်ပါယာ&oldid=744378" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ မေ ၂၀၂၂၊ ၁၅:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။